Nlekọta nke igwe nkpuchi
Imezi igwe nkpuchi mgbe nile nwere ike ijide n'aka na akụrụngwa ahụ nwere ike ịkwado ọnọdụ ime ihe kwesịrị ma dị mma maka ogologo oge. Ngwongwo ihe eji eme ihe na-egbochi mmezi mgbochi na nhazi atụmatụ. N'ihi na mmezi nke nkpuchi igwe, mmezi na idozi ụzọ nke ...
Kedu ka esi belata ọdịda nke igwe nkpuchi?
Igwe ihe nkpuchi bụ usoro nhazi njikwa dị elu, nke nwere ike ijikwa ihe ahụ otu oge site na mmemme PLC. N'ime usoro mmepụta niile, a ga-arụ ọrụ ahụ naanị site na nri nri, nke bụ usoro imepụta akpaaka. Kedu ka esi belata ọdịda nke igwe nkpuchi? ...
Akpaaka Nkpuchi igwe
Ugbu a, ndị nkịtị nkpuchi igwe na ahịa na-ekewa n'ime akpaka nkpuchi igwe, akpaka N95 nkpuchi igwe, ewepụghị nkpuchi igwe, mpịachi nkpuchi igwe, duckbill nkpuchi igwe, eriri nkpuchi igwe na elu ntị nkpuchi igwe. The akpaka nkpuchi igwe bụ akpaka mmepụta kwadebe ...
Site na ntiwapụ nke coronavirus ọhụrụ, ihe nkpuchi ahụ aghọwo ngwaahịa na-ere ọkụ na nwa oge, ọ bụkwa ihe ga-enwerịrị. Ọnụ ego nke ihe mkpuchi a na-ekpofu dị ezigbo ala ma nwee ike mepụta ya n'ọtụtụ nnukwu ma rụọ ọrụ nke ọma na igwe ọrụ. Igwe nkpuchi na-eme ...
Ihe edeturu maka ịhọrọ igwe nkpuchi
Nke mbụ, nhọpụta nke ihe nkpuchi kwesịrị ịdabere na nkọwa na ụdị nke nkpuchi mepụtara. Okwesiri ịhọrọ igwe nkpuchi ewepụghị ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe nkpuchi nwere ike iwepu ewepụtara nke ọma na ụlọ ọgwụ. Ọ kachasị mma ịhọrọ machị nkpuchi nkpuchi atọ ...
Ozi ọma nke mbupu akụrụngwa
Na July, site na elu igwe na-acha anụnụ anụnụ, bọlbụ na-akwụgharị dị ka anyanwụ, igwe ojii dị ka a ga-asị na anwụ na-acha ya, funyụrụ n'enweghị ntụpọ. Sancing technology na-agba ịnyịnya oké ifufe ahụ! Na Julaị 26, 2020, a ga-ewepụta igwe nkpuchi ụgbọ elu abụọ nwere otu traktọ na otu igwe n'oge. Ndị a machi ...
Igwe nkpuchi ihu, Anti Static Afọ Cloth, Nkpuchi Manufacturer, Otu Dọrọ Otu Nkpuchi Igwe, Uhie Uhie Uhie, Packaging Afọ akpa,